Xarrago qabow oo cirro iyo buluug ah | Ragga Stylish
Cawl iyo buluug - Elegance iyo freshness xagaagan
Rakiban Knit Blazer - $ 64.99 at ASOS
Ikhtiyaariga surwaalka dharka iyo blazer midabkiisu kala duwan yahay ayaa isku dhafan oo na siinaya xarrago ee dacwadaha laakiin aan lahayn qayb badan oo isku mid ah iyo caajis. Waa ikhtiyaar weyn oo ku saabsan ballanqaadyadaada xagaaga, sida aroosyada ama shirarka ganacsiga.
Si kastaba ha noqotee, maahan kaliya laba midab oo noo adeegta, laakiin si looga faa'iideysto isku-dhafkan casri ah iska hubi in midabka baalashleyda iyo surwaalku midba midka kale uu si fiican isaga kaashanayo.
El cawlan khafiif ah iyo buluug dhexdhexaad ah ayaa ka mid ah isku-darka aan jecel nahay xagaaga. Kuwani waa laba midab oo cirro leh oo si wada jir ah u bixiya xarrago. Intaas waxaa sii dheer, waa urur cusub oo cusub, tayo mudnaan leh inta lagu jiro bilaha diiran, gaar ahaan markay tahay xirashada surwaal dheer iyo jaakad.
Waxaan u xafidi lahayn cawlkii surwaalka dharka iyo midabka buluugga ah Ameerika (Qaybta dusheeda waxaad ka arki kartaa waxa aan uga jeedno markaan dhahno buluug dhexdhexaad ah, midkoodna iftiin iyo madow midna). Si loo soo koobo muuqaalka, waxaan ku dari lahayn shaati cad, xarkaha kareemka, iyo kabo bunni ah oo Oxford ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Cawl iyo buluug - Elegance iyo freshness xagaagan